Vamwe vashandisi vari kusangana nekunyanyisa bhatiri kunwa ne iOS 14.6 | IPhone nhau
Musi waMay 24, Apple yakatanga iOS 14.6, vhezheni iyo pakutanga zvainge zvakarongerwa kuve zvekupedzisira zveIOS 14Nekudaro, zvinoita sekunge hazvizove, nekuti vazhinji ndivo vashandisi vanozviti vane matambudziko nehupenyu hwebhatiri mushure mekuvandudza kune iyi vhezheni.
Kubva payakatangwa svondo rapfuura, vazhinji ndivo vashandisi vakaenda kumasocial network ku maforamu ekutsigira kusimbisa kuti chishandiso chako chinotora nekukurumidza mushure mekuvandudza chishandiso chako kuIOS 14.6. Kunyangwe vari zvinhu zvakawanda zvinopa hutano hwebhatiri, dambudziko iri rinobata munhu wese zvakaenzana.
IOS 14.5, Apple yakaunza chinhu chitsva che bhatiri hutano hwekugadzirisa ye iPhone 11, iPhone 11 Pro, uye iPhone 11 Pro Max. Iyo nyowani ficha inobvumidza iyo sisitimu kugadzirisa zvakare iyo bhatiri hutano hwebhatiri kuti ive nechokwadi chekuti bhatiri yehutano kuyerwa kwakarurama
Kutevera iyo yekuvandudza yakaburitswa mwedzi wapfuura, vashandisi vakaona kuti yavo iPhone 11 bhatiri hutano hwachinja mushure mekugadzirisa maitiro, kwete kungodzikiswa, sekune dzimwe nguva bhatiri hutano huwandu hwakwira.
Zvichemo nekushandisa zvakanyanya bhatiri zvinowanzoitika zvakajairika mumazuva ekutanga apo sisitimu inochinja uye ichiita akasiyana indexing uye ekuchenesa zviito zvemafaira.
Nekudaro, vhiki mushure mekuburitswa, zvichemo zvevashandisi zvinoramba zvichizadza maforamu, saka zvinopfuura zvingangoita kuti Apple ichafanirwa kufambisira mberi iyo iOS 14.7 vhezheni, vhezheni iyo parizvino yatove mubeta, sekureba painogadzirisa dambudziko rekushandisa zvakanyanya bhatiri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Vamwe vashandisi vari kusangana nekunyanyisa bhatiri kunwa neIOS 14.6
Zuva rechipiri ndakatoderedza ios kusvika 14.5.1, bhatiri rakanga risina chinhu. Iye zvino zvakakwana zvakare.
Usanonoka nekuti apple rinomira kusaina ios 14.5.1
Kadhi reCoinbase ikozvino rinotsigira Apple Pay